Android လုလင်: June 2013
0940xxxxxxx,0943xxxxxxx,0942xxxxxx,09444xxxxx ဖုန်းတွေမှာ Ringtune တောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ
ကိုသန်းတိုးအောင်ဆီက မ လာတဲ့ 940xxxxxxx,0943xxxxxxx,0942xxxxxx,09444xxxxx ဖုန်းတွေမှာ Ringtune တောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ ဘော်ဘော်တို့ အဆင်ပြေအောင်ပြန်တင် ပေးလိုက်တယ်
Credit to သန်းတိုးအောင်
ရေးတဲ့အချိန် 8:04 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Message လေးတွေကို AUTO ပို့လို့ရတယ်
839 KB ပဲရှိတာပါခင်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 11:57 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Phone Bill မကုန်အောင် အင်တာနက်အသုံးပြုမယ် (Update)
(မှတ်ချက် ကျွန်တော်ကတော့ Samsung Galaxy Ace နဲ့ စမ်းသပ်ထားတာဖြစ်လို့
Galaxy APN ချိန်းနည်းအတိုင်းတင်ပြပါမယ်)
Setting >>>Wireless and networks>>>Mobile networks>>>Acess Point Names ကိုအဆင့်ဆင့်သွားပါ ပြီးရင် Menu key ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုရွေးပါ ပြီးရင်
ရေးတဲ့အချိန် 8:30 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ ဖုန်းကတ် hacking, သိမှတ်စရာ
Call Schedule v3.3.6(အချိန်မှတ်ပြီးAuto ဖုန်းခေါ်ခိုင်းမယ်)
English To Myanmar Dictionary လေးတစ်ခုရထားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Android Phone
များမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခြား Android Dictionary တွေထက်အားသာတဲ့အချက်ကတော့
History နဲ့ Save Words ဆိုတဲ့ Function နှစ်မျိုးပါဝင်လာလို့ပါဘဲ။ History မှာတော့ မိမိရှာထားဖူးသမျှ
Words တွေကို History ထဲမှာအလွယ်တကူပြန်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Saved Words မှာတော့ မိမိ Save
လုပ်ထားချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို Save လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ စကားလုံးတွေအပြင် သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပါ ပြန်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုဘဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ Install လုပ်ပြီး
သွားရင်တော့ အင်တာနက်ကွန်နရှင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ဖွင့်ထားပေးပြီးမှ အသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ Application
အတွက်လိုအပ်တာတွေကို အရင်ဆုံး အလိုလျှောက်ဒေါင်းပါတယ်။ ဒေါင်းယူချိန်ကလည်း ကွန်ကောင်းရင်
Second 30 ကျော် 40၀န်းကျင်လောက်ဘဲကြာမှာပါ။ ပုံမှန်ကွန်နဲ့ဆိုရင်တော့ အလွန်ဆုံး 2မိနစ်လောက်ဘဲ
အင်တာနက်ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုတာပါ။ ဒေါင်းတယ်ဆိုတာကလည်း Application က Auto ဒေါင်းတာဖြစ်ပါ
တယ်ဗျာ။ ပထမဆုံးစစဖွင့်ချင်း တစ်ကြိမ်ဘဲ ဒေါင်းဖို့လိုအပ်တာပါ။ နောက်ပိုင်းတွေတစ်ခါမှဒေါင်းစရာမလို
Apk လေးတွေကို ဖုန်းမှာ ကွန်ပျူတာကနေ Install ဖို့ ဆော့ဝဲသေးသေးလေး တစ်ခု ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲကလည်း သေးတယ်။ အသုံးပြုရ၊ ဒေါင်းရ လွယ်ကူမှာပါ။
Android ဖုန်းကနေ Wireless & Bluetooth စနစ်ပါရှိတဲ့ Printer များသို့
ဒီပိုစ့်လေးကိုတော့ ကျနော် ကိုဝင် ဆိုဒ်ကနေတွေ့လို့ ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Android ဖုန်းကနေ Wireless & Bluetooth စနစ်ပါရှိတဲ့ Printer များသို့ ကွန်ပျူတာမလိုအပ်ဘဲနှင့် Print Out
ထုတ်နိုင်တဲ့ Software အလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..ဓာတ်ပုံတွေ..Email တွေ..စတဲ့ ဖိုင်တွေကို Computer
မလိုဘဲ တိုက်ရိုက် Print Out ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..အသုံးလိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ...
ဘယ် HUAWEI ဖုန်းမဆို မြန်မာလိုမြင်ရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ
ဘယ် Huawei မဆို အမြစ်မတူးဘဲ မြန်မာဖောင့်လေးထည့်ကြည့်မယ်
CWM လေး တင်ရရုံ မြန်မာ font ထည့် လိုရပါတယ် ။ သက်ဆိုင်ရာ CWM ကတောကိုယ်ဘာသာရှာတောဗျာ :-D ကျနော်တွေ့ ဘူး သလောက် ဘယ် Huawei တွေမှာမဆို CWM တင်လို့ရရင် မြန်မာဖောင့်တည့်
လွယ်ကူပါတယ် :P လိုအပ်တဲ့ font ကိုဒေါင်းရအောင်
HUAWEI တွေ Firm ware တွေရေးနည်းတူတူပါပဲ ပါဝါပိတ်ပီး ဘက်ထရီခဏချွတ်လိုက်ပါ ပီးရင် SD ကဒ်အသစ်ကိုဖော်မတ်ရိုတ်ပီး အောက်ကပေးထားတဲ့လင့်ကနေမိမိရဲ့ဖုန်းမိုဒယ်ကိုရှာပါပီးရင်းဒေါင်းပီးဖိုင်ကိုဖြေပါ dealod ဖိုင်တစ်ခုပဲsd ကဒ်ထဲထည့်ပါ ပီးရင် volume + နဲံvolume - နောက် power
Android မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် လျှို့ ဝှက်ကုဒ်များ (မြန်မာလို ရှင်းပြချက်များ)
Android မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် လျှို့ ဝှက်ကုဒ်လေးတွေကို သိထား
*#*#0673#*#* သို့မဟုတ် *#*#0289#*#* – Melody test
Root Browser ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်း
ဒီပို့(စ်)လေးကတော့ Root Browser ကို အသုံးပြုပြီး Root လုပ်နည်းပါ။
Android OS Device မှာ Myanmar Keyboard ထည့်သွင်းလို့သည့်အခါမှာ
Beta.zip ဒီလိုမျိုး File ကို Application/ .apk အဖြစ်ပြောင်းပေးရပါမယ်။
ဒီထက်ရှင်အောင်ပြောရရင် .zip ကို .apk File အဖြစ်ပြောင်းမှသာလျှင်
Android OS Device မှာ အသုံးပြုလို့ရနေတာကြောင့်ပါ။
၁။ Root Browser ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပုံကို ကြည့်ပါ။
အောက်က Root Browser ကိုအရင်ဆုံး Install လုပ်ပါ။
အဆင့် ၂။ SDCard မှာ သိမ်းစည်ထားတဲ့ မိမိ File ကိုရှာလိုရင်။ အောက်ပုံကို ကြည့်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို အမှန်အတိုင်း မြင်ရမယ့် Myanmar Map App v1.0 Apk
Myanmar Topoghraphy Map
Mrauk OO Map
တွေပါဝင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စေတီဘုရား၊ ATM စက်များ၊ ဘဏ်များ၊ Shopping Center, ဆေးရုံ စတာတွေကို English Language နဲ့ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်.. Install လုပ်ပြီးရင် မြေပုံတွေ Update ဆွဲဖို့ Internet တော့ ချိတ်ပေးရပါမယ်..
Google Play သုံးသူများကတော့ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatestwebapp.myanmarmapapp မှာ တိုက်ရိုက် Install လုပ်နိုင်ပါတယ်..
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ တစ်ခြားဖုန်းထဲက ph call, misss call, msg, contact list တွေကို လှမ်းကြည့်မယ်
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ တစ်ခြားဖုန်းထဲက ph call, misss call, msg, contact list တွေကို လှမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်
တစ်ခြား feature တွေကတော့ vibrate, silent, Flightmode, လုပ်လို့ရပါတယ် ပိုမိုက်တာက အဲ့ဖုန်းမှာ Internet ဖွင့်ထာုးရင် GPS location လှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့အထိ မိုက်ပါတယ်
ဒီ apk ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ် ဖုန်းနဲ့ သူ့ဖုန်း ၂ လုံးစလုံး မှာ ဒီ apk ကို install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ သူ့ဖုန်းထဲမှာ သူမသိအောင် ဒီ apk ကို install လုပ်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 8:30 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အန်းဒရိုက်ဖုန်း အသုံးပြုသူ သူငယ်ချင်းများ အတွက် App လေးတစ်ခု ပြန်ည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။
App ရဲ့ အမည်လေးကတော့ FVD ဖြစ်ပါတယ်...။
ဘာလုပ်လို့ ရလဲဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်လေးကို ကြည့် လိုက်တာနဲ့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ.....။
FB ပေါ်မှ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလော့ ယူလို့ ရ App လေးပါ...။
အရင်ဆုံး App လေးကို ဒေါင်းလော့ယူပါ...။
ဒီနေ့ ရှာဖွေရေးလုပ်တော့ ထူးထူးခြားခြား မြန်မာ app လေးတစ်ခု သွားတွေ့တယ်။ ကိုးန၀င်း ဆိုတဲ့ app ကတော့ ကိုးန၀င်း ပုတီးစိတ်နည်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်လို ပုတီးစိတ်ရမယ် ဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးပါတယ်။ မြန်မာ Developer
Pyae Phyo Shein က ရေးဆွဲထားတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ .. ကိုးန၀င်း မိုးလင်းမှ သိသွားအောင် အဓိဌာန် ပုတီးစိတ်ချင်သူတွေနဲ့
ပုတီးစိတ်နည်း သေချာ မသိသေးသူတွေ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ယူလိုက်ကြဗျာ။ ယခုလို မြန်မာ app တွေ ဖန်တီးလာကြတာကို အရမ်းသဘောကျ လေးစားမိတယ်ဗျာ
download - (1.8MB)
ဖုန်း ဖြင့် 3G အင်တာနက် သုံး သူများ ဆောင် သင့် တဲ့ ဆော့ဝ်
ဖုန်း တွေ အင်တာနက် ရတော့ တော်တော် များ များ သုံး လာကြ ပါတယ် ။ကွန်နက် ရှင် က သိပ်မကောင်း တော့ စောင့် ရင်း နဲ့ အိပ်ပျော် သွား တာတို့ မေ့ သွား တာတို့ ရှိတက်ပါတယ် ။ အဲ့ ချိန် မှာ ပိုက် ဆံ မကုန် ရအောင် ဒီဆော့ဝ် လေး က ကူညီပေး မှာပါ ။
သုံး ရတာ လဲ အရမ်း လွယ်ပါတယ် ။သွင်း ပြီး ရင် စသုံး ချင်ပြီ ဆို အဲ့ ဆော့ဝ် ပေါ် တစ်ချက်ထောက် လိုက် ရင် စတင် ပြီး နောက် တစ်ချက် ပြန်ထောက် လိုက် ရင် ပိတ်သွား ပါမယ် ။
သူက တော့ ဖုန်းမျက်နှာ ပြင် မှောင် သွား တာ နဲ့ ပိတ်ပေး မှာ ဖြစ် ပြီး ပါဝါ ခလုပ် တစ်ချက် ပြန်နိုပ် ရင် ဖြစ်ဖြစ် ကီး တစ်ခုခု နိုပ် လို့ ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ ပြင်လင်း တာ နဲ့ အင်တာနက် ပြန်ဖွင့် ပေးမှာပါ ။ ဖုန်းသုံး နေ ရင် screen ကပိတ် သွားပါဘူး ။မသုံး ပဲ ဘယ်လောက် ထားရင် ပိတ် မလဲ ဆို တာ ကိုယ့် ဖုန်း ရဲ့ screen time out ပေါ် မူတည်ပါမယ် ။ setting ထဲက display အောက် မှာ screen timeout မှာ ချိန် နိုင်ပါတယ်။
[✔] GSM Network
[✔] CDMA 450/800 MHz network
[✔] CDMA 800 MHz (1500 kyats)
တို့ ကို လက်ကျန် ကြည့်၊ ငွေ ဖြည့် ၊ တခြား သူကို ဖြည်ပေး ခြင်း များ ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ် ။
အစ်ကို ဘီအီးဒီ အောင်သိုက်က gtalk ကနေလှမ်းတောင်းလို့ တင်ပီးသားလည်း မရှိသေးတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် SII plus လေး root ဖောက်နည်းနဲ့ cwm သွင်းနည်းကို
ကဲအောက်မှာလိုအပ်တာလေးတွေဒေါင်းလိုက်ပါဦးနော် ပီးရင် လုပ်ငန်းစမယ်
1) Cwm file လေးကို ဒီနေရာ မှာဒေါင်းပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:43 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Back key နဲ့ Home key သုံးမရသူများ နှင့် ခလုပ်နာမှာစိုးလို့မသုံးချင်သူ တွေအတွက် ဆော့ဝဲ
အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် Back key နဲ့ Home key သုံးမရ သူ များ နှင့် ခလုပ် နာမှာ ဆိုးလို့ မသုံး ချင်သူ တွေ အတွက် ဆော့ဝ်လေး ပါ ။တခြား ဆော့ဝ် တွေ လို Root လဲမလို အပ်ပါဘူး ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
GPS ကို အသုံးပြုပီး မိမိ ရောက်ရှိနေသော နေရာအား offline ကြည့်မည်။(for myanmat country for android)
အခု ပေးမှာက တော့ gps ကို အသုံးပြုပီး မိမိ ဘယ်နားမှာ ရောက်နေလဲ ဆိုတာကို ကော်နက်ရှင် မလိုဘဲ offline ကြည့်လို.ရတဲ့ app လေးပါ။မြန်မာတစ်နိုင်ငံပဲ ရမှာပါ ဘာလို.ဆို offline map မို.လို.ပါ။ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲကတော့ နှစ်ခုပါ အောက်မှာဒေါင်းပါ။
နှစ်ခု စလုံးဒေါင်းပီးရင် Maverick.rar အား ဇစ်ဖြည်ပါ။ဖြည်ပီးသား ဖိုင်အား ဖုန်း sd cardထဲသို.ထည့်ပါ။sd ကတ်ထဲသို. ထည့်သောအခါတွင် မည်သည့်ဖိုဒါအောက်မှ မထားပါနှင့် သီးသန်.ထည့်ထားပါ။ပီးလျှင် ဖုန်းမှ gps ကိုဖွင့်ပါ။ထို.နောက် Maverick.crk.ADS.Removed.apk အား ဖုန်းထဲတွင် install လုပ်ပါ။ပီးရင်တော့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဖွင့်ပီလျှင် မြေပုံလေး ရဲ. အပေါ်ထောင့်နားက အကွက်လေးကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပီးလျှင် google map ကို ရွေးပေးပါ။ ထို.နောက် အိမ်အပြင်သို. ထွက်ကာ ခေတ္တ ခဏလမ်းလျှောက်ပေးပါ။ (လိုင်းချိတ်မိစေရန်ဖြစ်သည်)။ လိုင်းချိတ်မိ မမိ ကို သိစေရန် ညာဘက်ထောင့်နားတွင်ရှိသော အ၀ါရောင်အတုံလေးများအားကြည့်ပါ။ ၁၀ လောက်ချိတ်မိလျှင် အပြာရောင်မြှားကွေးလေးအားနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ မိမိ ရောက်ရှိသောနေရာ အား အတုံးလေး ဖြင့်ပြပေးပါလိမ့်မည်။ လမ်းနံပါတ်များ အထင်ကရနေရာများ အားလုံးပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM6comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဟာဝေး ဖုန်းတွေ အတွက် unlock code ကို သူ.ရဲ.ဆိုဒ်မှာ သွားတောင်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ ခု ကျွန်တော်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလေးနဲ.တင်ကို လုံးဝအဆင်ပြေမှာပါ။ အရင်က ဟာဝေးဖုန်းတွေ root လုပ်ဖို.အတွက်ဆိုရင် unlock code တောင်းနေရတာနဲ. တင် တိုင်ပတ်နေတတ်ပါတယ်။ခုတော့ ကော်နက်ရှင် လဲ မလိုတော့ပါဘူး offline အနေအထားနဲ. ကုဒ်ကို ချက်ချင်းတောင်းလို. ရပါပီ အဲ့ဆော့ဝဲကို လိုချင်ရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဖုန်းမှာ ကိုယ့်ပုံကို 3D ဒီဇိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ပြောခိုင်းရအောင်
PhotoSpeak, the No. 1 iPhone hit from Japan, makes the leap to Android !
ကိုယ့်မျက်နှာပုံကို 3D ပုံစံနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားကို ပြောခိုင်းလို့ရတဲ့ app လေးပါ
ချစ်သူမရှိတဲ့ သူများကတော့ ချစ်ချစ်မျက်နှာလေးကို ပြောင်းပြီး ကိုယ်ပြောချင်ပြောခိုင်းနေပေါ့
ရသေ့စိတ်ဖြေပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ ရှိပြီးသားတွေကတော့မလိုဘူးပေါ့လေ ထပ်လိုချင်သူများအတွက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ် ခိခိ နောက်ထှာ
PhotoSpeak, the No. 1 iPhone hit from Japan, makes the leap to Android
What's in this version : (Updated : Mar 21, 2012)
Fixed camera in more devices
Takeaportrait photo or pick one from your photo library, and the face will automatically start moving in 3D.
Talk to it and it will repeat your every word.
Share your 3D movie with friends via PhotoSpeak Mail.
Required Android O/S: 1.6+
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
သူငယ်ချင်တို့ သိတဲ့အတိုင်ပဲလေ မြန်မာပြည်မှာဖုန်းလိုင်းသိပ်မကောင်းဘူးလေ
ခေါ်တိုင်းမ၀င် နှိပ်တိုင်းမရ ပြောတိုင်းမကြားရတဲ့ဘ၀ကလွတ်နိုင်ပါစေ
1500 တန် cdma 800mhz အင်တာနက် ချိန် မရသူ များ အတွက်
1500 အင်တာနက် ချိန် မရသူ များ အတွက်
Mobile Data ကို အရင်ပိတ်ပါ ။APN ထဲ ရောက်ရင် Menu နိုပ် လိုက်ပြီး reset to default လုပ်ပါ ။ပြီး ရင် CN net ထဲ ၀င် ပြီး မှအောက်က အတိုင်းချိန် ပါ ။
ကျန်တာ ဒီတိုင်း ထားပါ ။ပြီးရင် menu နိုပ်ပြီး save လိုက် ပါ ။ Mobile data ဖွင့် ကြည့် လိုက် ပါ ၁ မိနစ် လောက် မှ မတက်ရင် ပိတ်ပြီး ဖုန်း reset ပြန်ချ ပါ ။ ပြန်တက် လာရင် ပြန်စမ်း ကြည့် ပါ ။ မရ ရင် အစက ပြန်လုပ်ပါ ။
Android ဖုန်းတွေမှာ Factory Reset လုပ်လိုက်လို့ Gmail,Gtalk,Google Play တွေ ၀င်လို့ မရ တော့ရင်
Android ဖုန်းတွေမှာ Factory Reset လုပ်လိုက်ရင် တချို့ဖုန်းတွေ မှာ Gmail,Gtalk,Google Play တွေ ၀င်လို့ မရ ဘူး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ကွန်ပျူတာမှာယူသုံးလဲမရပါဘူး..တခြားဆိုဒ်တွေဝင်လို့ရတယ်..Google service တွေတစ်ခုမှဝင်မရတတ်ပါဘူး
အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ဖုန်းထဲက hosts file ကိုပြင်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်
။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကျနော် အောက်မှာ ရှင်းပြပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
(၁) ဖုန်းကို အရင်ဆုံးအမြစ်တူးထားရပါ့မယ်။
(၂) Total commander ဆိုတဲ့ apk ဖိုင်လေးကို ဖုန်းထဲကို Install လုပ်လိုက်ပါ။
TotalCommander ကို ဒီလင့် မှာ ဒေါင်းပါ
(၃) TotalCommander ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
(၄) File system root\_etc\_hosts ကိုရှာပါ။
(၅ ) hosts file ကို ဖိထားပြီး edit file ကို ရွေး၊Totalcmd-Editor နဲ့ဖွင့်ပါ။
127,196,99.209 android.clients.google.com mtalk.
ဒုတိယစာကြောင်းရဲ့ ရှေ့မှာ # ထည့်ပေးပြီး အပေါ်မှာ save ကို နှိတ်လိုက်ပါ။
#127,196,99.209 android.clients.google.com mtalk.
(၆) ဖုန်းက Re-mount Drive? ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၇) ဖုန်းကို Restart ချပြီး Gmail အကောင့် ကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Huawei T8828 Official Firmware (android လုလင်မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးတောင်းဆိုနိုင်ရန် နေရာမှာ phyo ko တောင်းထားတာလေးပါ)
t8828 firmware တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Download - T8828 Official firmware
ရေးတဲ့အချိန် 10:32 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရေးတဲ့အချိန် 9:40 PM 19 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android versions 1.5 မှ 4.2 ထိ Root လုပ်နိုင်တဲ့ SRS Root v4.5 ( One Click )
ဖုန်းအမျိုးအစားပေါင်း 1400 လောက် Root ရတယ်....
One Click Root တွေ အတိုင်းပဲ .....
Samsung Galaxy S2 / S3, Note / Note2 etc...
SRS Root v4.5 ( One Click )
Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် FreeCall ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Application လေးပါ
..Application လေးရဲ့အမည်ကတော့ SAYTYA Facebook Caller လေးပါ
ဒီကောင်လေးကတော့ Android and IOS Device တွေအပါအ၀င် Window OS and MAC OS တွေပေါ်မှာပါတင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Phone <=> Phone
Phone <=> PC
ဒီတစ်ခါတော့ အသစ်ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာကို ဖုန်း Free Call လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီ Free Call လေးက တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်.. မိမိခေါ်ချင်တဲ့သူမှာ ဒီ Software ကို တင်ထားမှ ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး တင်မထားရင်လည်းခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..အကောင့်မဖွင့်ဘဲနဲ့လည်း
အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apk ကို ဖုန်းမှ Install လုပ်ပြီးရင် သင့်ကို 30 ပေးပါတယ်
ပေးထားတာကို ကုန်အောင်သုံးလိုက်မိရင်တော့ဖြုတ်ချပြီးပြန်တင်လည်းမရတော့ပါဘူး..ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုများလာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ သူ့မှာပေးထားတဲ့ Free ဂိမ်းတွေကို Download လုပ်ပေးရင် 30 ကနေပြီးတော့ပိုပိုများလာမှာပါစမ်းကြည့်တော့လိုင်းက တော်တော်လေးကို ကောင်းတာကိုတွေ့လို့
post by it min min
Android မှာ ကိုယ်ပွားလေးတွေဖန်တီးပေးမယ့် app တစ်ခု
ဒီ app လေးက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ computer မှာ photoshop နဲ့ အလုပ်ရှုပ်စေနိုင်မယ့်
ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပွားပုံတွေကို ဖန်တီးချင်သူတွေ
အတွက် လုံးဝအကြိုက်တွေ့မှာပါ background ကတော့ အမျိုးမျိုးပြောင်းမရပါဘူး
background တစ်နေရာထဲမှာ ပုံစံမျိုးစုံရိုက်ပြီး ပေါင်းစပ်နိုင်တယ်လို့ အလွယ်ပြော
လို့ရပါတယ် အောက်ကပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်အုံးနော် ကြိုက်ရင်ဒေါင်း
ဖိုင်ဆိုဒ်တော့များတယ် 40MB တောင်နော်
ကဲကြိုက်ပြီလား ဒါဆိုလည်း ဒီမှာ >> ဒေါင်းတော့
အော် နာမည်လေး လည်း မှတ်ထားအုံး Clone Camera v1.1